May 2, 2021 N88LeaveaComment on बिहेमा सालीले भिनाजूको जुत्ता लुकाइन्, दुलाहाले यस्तो गरे हरकत, दुलहीले बोलाइन् प्रहरी
बिहेमा केटी पक्षले दुलाहाको जुत्ता लुकाउने, दुलाहाले केही रकम दिने र केटी पक्ष बिशेषत दुलाहाका सालीहरुले जुत्ता फिर्ता दिने हिन्दु बिवाहमा एक चलन हो । तर यस्तो चलनका कारण बिहे नै भाँडिएको छ भने दुुलाहा प्रहरी चौकी पुुगेका छन् । यो घटना भारतको हो । त्यहाँ उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरमा रहेको सिसौली गाउँमा उक्त घटना भएको […]
लकडाउन अघि धरहराको उद्घाटन त भयो तर भित्री रहस्य यस्तो पो रहेछ…..
May 2, 2021 N88LeaveaComment on लकडाउन अघि धरहराको उद्घाटन त भयो तर भित्री रहस्य यस्तो पो रहेछ…..
काठमाडाैं । बाहिरी आवरण हेर्दा लाग्छ, धरहराको पूरै काम सकियो। टुप्पोमा सुनको गजुर सजिएको छ। २० औं तलामा उपत्यका नियाल्न मिल्ने बार्दली बनेको छ। धरहरा सेतो रङ पोतेर चिरिच्याट्ट पारिएको छ। ठाउँठाउँमा झिलिमिली बत्ती राखिएका छन् । तर बाहिरी आवरणमा देखिएझै धरहराको पुनर्निर्माण पूरा सकिएको छैन। बाहिरबाट सिंगो रुप देखिएको धरहराको अझै धेरै काम गर्न […]
मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको पुन:नियुक्तिविरुद्ध देउवा र प्रचण्ड एकै स्वरमा गर्जिएपछि बालुवाटारमा खैलाबैला
May 2, 2021 May 2, 2021 N88LeaveaComment on मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको पुन:नियुक्तिविरुद्ध देउवा र प्रचण्ड एकै स्वरमा गर्जिएपछि बालुवाटारमा खैलाबैला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुन:नियुक्तिलाई घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिकाे संज्ञा दिनुभएकाे छ । आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सभापति देउवाले भन्नुभयाे, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु ।’ नेकपा एमालेले […]
प्रधानमन्त्री ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत ? यस्ताे छ संसदकाे अंकगणित
May 2, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत ? यस्ताे छ संसदकाे अंकगणित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहान नेकपा एमालेमा आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए, लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे । दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र, फेरि राष्ट्रपति निवास पुगे । दौडधुपको निष्कर्षका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट साँझ वक्तव्य आयोः– प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न […]
केन्द्रमा केपी ओलीलाई साथ, प्रदेशमा शंकरलाई एकपछि अर्काे घात
May 2, 2021 N88LeaveaComment on केन्द्रमा केपी ओलीलाई साथ, प्रदेशमा शंकरलाई एकपछि अर्काे घात
काठमाडाैं । संघीय सरकारमा हृदयश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । उनी एमाले होइनन् तर एमालेको सूर्य चिन्हबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन् । त्रिपाठीजस्तै लुम्बिनीमा पनि उनका दुई कार्यकर्ता सूर्य चिन्हबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए । तर उनीहरुले आफूहरु एमाले नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको साथ छाडेका छन् । त्रिपाठी र उनको समूहले केन्द्रमा ओलीलाई […]
May 2, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र कति थपिए काेराेना संक्रमित ?
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड संक्रमित फेला परेका छन् । एकै दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा ३५ सय ९५ संक्रमित फेला परेका हुन् । यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा मात्र २७ सय ४४ जना रहेका छन् भने ललितपुरमा ५५० र भक्तपुरमा ३०१ जना संक्रमित रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालभर थप ७२११ जनामा कोरोना भाइरसको […]
May 2, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, एकैदिन ७ हजार बढी संक्रमित थपिए
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७२११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर विधिबाट ७१३४ र एन्टिजेन विधिबाट ७४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यो नेपालमा एक दिनमा भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित हो । शनिबार मात्र नयाँ संक्रमितको संख्यामा रेकर्ड ५७६३ संक्रमित फेला परेका थिए । एकै दिनमा यो रेकर्ड […]
May 2, 2021 N88LeaveaComment on कारभित्र कसरी भयो तीन बालकको मृत्यु ?
काठमाडौं । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–६, स्वर्गद्वारी टोलमा एउटा कार माघ महिनादेखि पार्किङ गरेर राखिएको थियो । बिग्रिएपछि मर्मत नगरी राखिएको आरजे ०१ सीसी ०८८५ नम्बरको कार वरिपरि खासै मान्छे गएको पनि देखिँदैनथे । तर, शनिबार राति साढे ७ बजेतिर चाहिँ नजिकै रहेका अरुण बुढामगरले कारमा बत्ती बलेको जस्तो देखे । उनका अनुसार छेऊमा गएर हेर्दा […]
May 2, 2021 N88LeaveaComment on लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल पुनः नियुक्त
बुटवल । शंकर पोखरेल फेरि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। पोखरेलले आज बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसअघि ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। माओवादी […]
यी ३ राशिका युवती हुन्छन् साह्रै राम्रा, पहिलो भेटमै हुन्छन् फिदा
May 2, 2021 N88LeaveaComment on यी ३ राशिका युवती हुन्छन् साह्रै राम्रा, पहिलो भेटमै हुन्छन् फिदा
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जम्मा १२ राशि हुने गर्दछन्। राशि अनुसार सबै व्यक्तिको स्भाव पनि फरक फरक हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई तीन यस्तो राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका युवती देखेर पुरुष फिदा हुने गर्दछन्। वृष राशि वृष राशि हुने युवतीको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । पहिलो भेटमै पुरुषहरू यी राशिका युवतीप्रति आकर्षित हुने […]